by Jim Reiser, MS
Okulungileyo nokubi kweSifundo soBuqu
Ngaba ukubhukuda kwangasese kufundisa indlela eyona nto inceda abantwana ukuba bafunde indlela yokudada? Makhe sijonge kwiingxaki kunye nokuxhamla kwezifundo zokubhukuda zangasese.
Inani leemfundo zokubhukuda ezizimeleyo eziya kumfumana umntwana kunye nomqeqeshi ofanayo nento xa kuqikelelwe ukuba ngaba izifundo zokubhukuda zangasese zingezinye ezifanelekileyo. Umntwana unokuphucula ngokukhawuleza kwisifundo sabucala ngaphandle kwezinye iifom zezifundo.
Ndiyakholelwa ukuba ukuphuculwa ngokukhawuleza kuphelelweyo kwinani elizimeleyo lezifundo.
Ngoba? Ingqibelelo-mfundi-mfundi uhlala ehla kwexesha, efana noko kutheni kunzima ukufundisa umntwana wakho kwiimeko ezizimeleyo. Uluhlu olufanayo lukhula ngokuhamba kwesikhathi kunye nomfundi wakho wokubhukuda njengoko umntanantwiliso wenqanaba lootitshala kunye nokwanda komfundisi. Xa ufundisa isifundo "esisodwa," ekugqibeleni ulahlekelwe ngongqibelelo "ngutitshala-mfundi" kuba, ukuze ugcine isifundo sivuya kwaye simnandi, kufuneka ube ngumhlobo womntwana (ukuba uthethe). Xa oku kwenzeka, kukho ukuphuka ekugqibeleni komntwana emsebenzini. Iyahluka ukusuka komntwana omnye ukuya kolunye, kwaye ukusuka kolunye utitshala ukuya kwesinye, kodwa ekugqibeleni kwenzeka.
I-Factor yoLwazi lokuFunda
Enye into ekhuselekileyo eyenza ukuba inzuzo yezifundo ezizimeleyo ilahlekile ontanga. Abantwana abanenzuzo kuphela kuba nabantwana abangabanye kwisifundo sabo ngezizathu zentlalo kwaye bakwenza kube mnandi ngakumbi, kodwa abantwana bavame ukusebenza nzima.
Nangona bengenako ukukhuphisana ngokwemvelo, kusekhona ubunzima bomntu ukuba basebenze kancinci xa ujikeleze oontanga bakho.
Ukuzibandakanya ngumama wokufunda, kwaye oku kukuqwalasela okuza kudlala xa kugqitywa ifomathi engcono yeklasi - izifundo ezizimeleyo, i-semi-privates, trios, quads, amaqela amancinci, njl.
Kukho inani lezinto eziya kuphazamisa ixesha lokusebenza kwimiba nayiphi na ifomathi, kubandakanya ubudala, amandla okubhukuda, kunye noqeqesho lomfundi kunye namava. Nangona ootitshala abancinci abancinane, ixesha elifanelekileyo lokwenza umsebenzi liya kufumaneka kwiziko lokufunda ngasese. Nangona kunjalo, ngabafundisi abaqeqeshwe kakuhle nabaqeqeshiweyo, izifundo ezizimeleyo ngokuqinisekileyo ayifuni ukufezekiswa kwexesha lokusebenza.
Njengoko uyazi, umsebenzi wam wokugqibela uphumelele kwiMfundo yePhysical and Motor Learning / Motor Skill Acquisition. Enye into enomdla kakhulu yokuba andizange ndilibale malunga neempendulo. Uphononongo lubonisa ukuba UKUBA KWENKQUBO (ngaphezu kwe-50% yeso sihlandlo) KUYA KUFUNDA. Ingqiqo engaphezulu yempendulo ikhubaza ukufunda kukuba umfundi uya kuxhomekeke kwimpendulo. Ndiza kwongeza ukuba "abantwana bafuna nje ukuzonwabisa!" Akukhona ukuba abafuni ukufunda, kodwa uya kuqhuba ininzi na umntwana xa udonga xa ubhaduza ngaphesheya kwidama.
Ixabiso leNkcitho / iNzuzo
Okumangalisa kukuba, ngelixa ixabiso lezithuba zabucala liphakamileyo kakhulu kunamanye amafomathi, linikeza isikolo sokubhukuda izinga lokubuyisela eliphantsi (ngaphandle kokuba ezinye iifom zeklasi zingazalisi).
Kodwa ishishini ngaphandle, iingcebiso zam iingcali kunoma yimuphi umzali ofuna ukuba umntwana wakhe abe ngumngcingo ongcono ukuhlawula encinci (hamba nge-semi, trio, quad, njl) kunye nokufumana ngaphezulu (izifundo). Enyanisweni, ndinokubonisa ukuba ifilosofi iyinyaniso. Unokubuza umntu owaziyo okanye undibonayo ndifundisa abantwana bam kwaye baya kukuxelela ukuba ndihlala ndihlala nabantwana bam ngeyimizuzu, i-trios, okanye i-quads. Ngokweyiphi na idilesi endiyikhethayo, oko kukuthi, i-semi (2 ngo-1), i-trio (3 ngo-1), njl., Kuxhomekeke kwiminyaka yobudala kunye nekhono lomntwana.
Njengomnikazi wesikolo sokubhukuda, ndifuna kwaye kufuneka ndiyenze nayiphi na into eyenziwa ngabathengi, kodwa ndiyakuthanda ukuwafundisa ngeenzuzo kunye neengxaki kunye nokubanceda benze isigqibo esifanelekileyo kwizinto ezilungele umntwana wabo.
Ukuze isikolo sokubhukuda sokuqala singabikho kwisicwangciso sokucwangciswa kwesandi / isicwangciso sokubeka isifundo, iimfundo ezizimeleyo ngokuqinisekileyo zilula kakhulu ukucwangcisa.
Akudingeki ukuba ulungiselele ngaphambili ikhosi efunekayo kuba iqondo lomntu ngamnye lihlala linquma isicwangciso sakho sesifundo okanye ukuqhubela phambili. Nangona kunjalo, ukuba unesistim esilungileyo sokubeka indawo, unokwenza ulungiso lokucwangcisa "olungenanto" njengoko sivela ngo-1989!
Isixhobo soKhuseleko kwamanzi
Ukususela kumbono wokukhusela umonakalo, kunzima ukuba neemeko ezikhuselekileyo kunokongamela ngabanye. Nangona kunjalo, ndikhuthaza wonke umzali kungakhathaliseki ukuba iklasi elincinane kukujonga njani umntwana wakho ngokukhawuleza naxa ekhona okanye ejikeleze amanzi. Akukho nto enjengokujonga kakhulu xa kufike ukhuseleko lomntwana kwindawo yokubhukuda.
Kubaqalayo, ngokukodwa abo abanako ukuchukumisa phantsi, ndihlala ndithanda ukusebenzisa i-flot flotation device eyenza ngokucacileyo icandelo lokhuseleko kwiklasi. Ukuba ufundisa iqela elikhulu labaqalayo, tshela abafundi abangama-7 okanye ngaphezulu, ngoko ndingathanda ukhetho lwe-Life Guard oluvunyelweyo lwe-Life Jetet, ubuncinane de kube umfundi ephuhlise imimandla yokubhukuda kwaye angachukumisa phantsi.
Xa kuziwa ekukhetheni umqeqeshi, ufuna ukukhetha umntu onokholo lwefilosofi engumntwana. Kukho izinto ezininzi ezingakhuselekanga zingabungozi kumntwana ukuba indlela ejoliswe kumsebenzi ithathwa ngumfundisi ongalunganga. Ngokuqinisekileyo Abaqeqeshi beYunivesithi yeziFundo zeeNyuvesi baqeqeshelwa ukusebenzisa iindlela ezijoliswe kumntwana eziquka ukukhupha okukhuselekileyo, ukunyuselwa kwemvelo.
Kukho ixesha kunye nendawo yezinto ezizimeleyo, kwaye kukho abaqeqeshi, njengomhlobo wam osondeleyo uKatrina Ramser Parish, othanda nje ukufundisa izifundo ezizimeleyo.
Akukho nto iphosakeleyo ngayo! Wenza okuthandayo ukwenza! Ukuba awuhlali uvuyo kwaye uyonwabela oko wenzayo, ngoko yintoni na into? Kukho ukungafuneki kuwo wonke umgaqo. Ndikhetha ngokwenene into eyahlukileyo kwiimeko "ezininzi". Yintoni enye into ehlukileyo? Izifundo ezizimeleyo ezizimeleyo, ii-trios, kunye neekota, kwaye ukuba imeko ilungile, oko kukuthi, iminyaka yobudala kunye nokukwazi, amava ootitshala kunye nokuqeqeshwa, njl., Kukho indawo yeqela elincinci lokubhukuda.
Ukuhlaziywa nguDkt John Mullen ngoMatshi 25, 2016
Iintsana Eziphantsi kwamanzi aManzi
I-Wrestler Win-Loss Records kwi-SummerSlam
Yintoni eyona nto eqhelekileyo? Imibuzo Ephakamileyo Ye-8
Ngubani owenza iphi izwi kwi "Penguins yaseMadagascar"?
I-pH Inkcazo kunye ne-Equation kwiKhemistry
Ibhola lebhola lebhola leCheerleaders
I-Top 5 e-NFL yoNyana-iNyana
IVenus kwiTaurus Man - Iimpawu Zothando